Kedu ka m ga - esi meziwanye SEO m site na ịtọzi redlinks redirect?
Ee, ọ ga-ekwe omume ịnye ezigbo mmelite gị n'ogologo mgbalị gị na SEO - naanị site na ịtọzi njikọ gị dị ugbu a na itinye maka redirect backlinks. Kedu? Ọfọn, ka anyị hụ.
Ihe atọ kacha mkpa iji weghachite njikọ:
1 - 1500 60 bonus casino in online top. Ị nwere ike ijide oke usoro nke mmejuputa ya (n'adịghị ka òkè ọdụm nke ọrụ ọzọ, dịka ọmụmaatụ nke nkwado ọdịnaya);
2. Idozi njikọ ndị na-agbaji, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịkwalite ọnọdụ ịchọrọ ịchọta ma nweta ọtụtụ uru ndị ọzọ zoro ezo (e. g. , mma njirimara njirimara);
3. Ị ga - eme ihe kachasị mgbalị ị rụwororịrị.
N'iburu n'uche na usoro dum a na-eme na ọnụ ọgụgụ nwere ike igosi na ọ bụ ihe na-adịghị emetụta ma ọ bụ sie ike iji nweta nlezianya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ebe a bụ usoro nkenke iji mee ya n'ụzọ ziri ezi:
Chọpụta njikọ niile gbawara agbawa ị nwetara na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị.
Kewaa ha site na isi usoro redirect.
Jiri ụlọ ọrụ njikọ weebụ na ihe enyemaka iji dee redirects.
Mezue ọrụ gị site na redlink backlinks ma hụ ọkwa n'ozuzu.
Ịmata Njikọ Ejiri Ejiri
Ka anyị kpọgharịa ya ọzọ - anyị ga-achọ redirect backlinks na-eduga ụzọ iji gbajie ibe n'ime ebe nrụọrụ weebụ gị. ma ọ bụ blog. N'ụzọ dị otú a, ị ga-achọ ịnweta nchịkọta akụkọ pụrụ iche gbasara ha - iji ma ọ bụ Google Search Console, ma ọ bụ ihe enyemaka ọ bụla nwere ike ịntanetị maka data dị mma ma ghọtakwuo, dị ka Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), ma ọ bụ Ịkpọ ụda Frog SEO ududo. A sị ka e kwuwe, ọ bụ naanị gị ka ị ga-esi kpebie usoro ị ga-esi rụọ ọrụ ahụ.
Ime nke ahụ, cheta - ị ga - edozikwa ihe niile ị na - eme na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog, ebe ọ bụ na ọtụtụ URL nwere ike ịbanye na afọ ole na ole. Ya mere, ihe niile ị chọrọ bụ ịkwadebe maka ọtụtụ ntuziaka na ikekwe ọrụ - oge iji Google Search Console iji weghachite backlinks na aka ya.htaccess ma ọ bụ mgbakwunye pụrụ iche ma ọ bụrụ na ị na-eji WordPress. Ma ọ bụ ị nwere ike ịmegharịa ngwa ngwa ọtụtụ njikọ ndị chọrọ nhazi - na-eji otu n'ime ndị enyemaka enyere aka na ntanetị.
Splitting URLs By Redirect Patterns
Dịka onye ọrụ na WordPress, a na-atụ anya ka m mata usoro m ochie nke URL (dịka ọmụmaatụ, na-abịa dị ka ngalaba + afọ + ọnwa + post aha. html), na ụdị URL New (e. g. , ngalaba + post aha). N'ịnweta na Bekee a na-asụ, ị ga-ede akwụkwọ ntụziaka pụrụ iche maka bọtịnụ na-agba agba nke Google na-agwa ha banyere mgbanwe ndị a ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla ọzọ - ma na URL n'onwe ya, na koodu HTML (maọbụ, rụọ ọrụ na 301 redirects).
Ma mụ onwe m eji Permalink Helper Tools iji rụọ ọrụ na URL URL. Ihe niile kwesịrị ịkọwapụta onwe gị n'ebe ahụ, mana cheta na ịnwe ihe oyiyi URL dị ka URL nke na-amalite na ngalaba gị, tinyere nọmba na slash, ka ejedebe na afọ agbanwe agbanwe na WordPress, ma dee na HTML nke na-ewepụ oge ahụ. Cheta na a ghaghị ịme mgbanwe ahụ mgbe nile ma mechie ya na slash.
Backlinks zuru ezu na nyochaa ha
Iji mezue usoro ahụ, tinyezie gị. faịlụ htaccess na koodu site na njikọ FTP na nkesa gị. Kpachara anya - jide n'aka na ihe niile dị. M na-ekwu na ịchịkwa ohere ịnweta weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. Htaccess, ma ọ bụrụ na ihe na-agazighị njọ ị nwere ike ịdaba na ihe ọ bụla - ọbụlagodi na koodu ezighi ezi. N'ụzọ dị otú ahụ, ihe niile ị chọrọ bụ iji kewaa ntụgharị gị n'ime Isi Iyi na Target, gbasaa usoro nyocha na ngwá ọrụ crawler - na ị mechara!
Ntughari: otu usoro a nwere ike itinye aka na njikọ abanye n'ime ya. N'ezie, ọ bụrụ na ha ekwesịghị ịgafe ọ bụla redirects, ma ọ dị mwute, ọ gaghị adị mfe mgbe niile. Cheta - inwe redirect dị mma karịa 404.